App Store | IPhone News (Pejy 4)
Sintomy ny Afterlight maimaim-poana noho ny fampiharana Apple Store
Afterlight dia fampiroboroboana amin'ny Apple Store ho an'ny iPhone sy iPad ary azo sintonina maimaim-poana, hazavainay ny fomba.
Temple Run 2 dia manampy ny fanitarana Frozen Shadows
Temple Run 2 dia nanampy ny fanitarana Frozen Shadows
Ampidiro ao amin'ny App Store ny 4 ho an'ny Apple TV
Infuse 4 no mpilalao haino aman-jery tsara indrindra azonao atao amin'ny Apple TV dieny izao
Wunderlist manampy fanohanana ny 3D Touch sy Peek & Pop
Ny fampiharana Wunderlist hatao vao nohavaozina nahazo fanohanana ny 3D Touch sy Peek & Pop
Yoigo dia mamoaka ny fampiharana iPhone ofisialy
Yoigo amin'ny farany manome antsika izay nangatahan'ny mpampiasa betsaka, fampiharana hifehezana ny tahanay avy hatrany amin'ny iPhone.
Fanavaozana lehibe ho an'ny Real Racing 3
Ny fanavaozana vaovao an'ny Real Racing 3 dia ahafahantsika mankafy fiara vaovao efatra mahafinaritra azontsika alaina amin'ny hazakazaka mandresy.
Ekipa Fetch sy Put.io hitondra riaka amin'ny Apple TV
Ny fampiharana Fetch dia ahafahanao manampy renirano amin'ny kaonty Put.io anao ary mijery sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika ao amin'ny Apple TV
Plants vs Zombies 2 dia aseho ao amin'ny App Store ho iray amin'ireo "Essential Games", ity lalao ity dia efa manana loka mihoatra ny 30 ho an'ny lalao tsara indrindra.
Apple dia nanangana fizarana vaovao misongadina roa ao amin'ny App Store, mampiseho ireo fampiharana sy lalao mifanaraka amin'ny iPad Pro.
Plex for Apple TV dia misy amin'ny App Store izao
Plex dia misy amin'ny Apple TV. Efa zava-misy ny fandefasana atiny multimedia amin'ny fahitalavitra.
Beat Sports, Apple TV amin'ny endrika Nintendo Wii madio indrindra
Ny lalao Apple TV vaovao misy lalao mahaliana toa ny Beat Sports, lalao multiplayer mampiala voly amin'ny fomban'ny Wii Sports madio indrindra.
Ahoana ny fangatahana famerenam-bola avy amin'ny App Store mivantana avy amin'ny iPhone
Raha sendra nividy rindrambaiko tsy nahy ianao na tsy tianao fotsiny ilay zavatra vao nosintominao dia fantaro ny fomba fangatahana famerenam-bola avy amin'ny iPhone-nao.
Ny App Store dia efa manolotra sarin'ireo rindrambaiko marindrano
Ary farany, Apple dia naka mihoatra ny herintaona tamin'ny olan'ny fampisehoana fampiharana ny fisamborana fampiharana na lalao izay tsy miasa afa-tsy ny mitsivalana.
Word, Excel ary Power Point ho an'ny iOS dia nohavaozina miaraka amin'ny fiasa vaovao.
Ireto fampiharana fampiharana ireto dia misy fanitsiana fanehoan-kevitra, fanovana anarana, fisokafana pejy ary pejy maro hafa.
Apple dia manala ireo apps nesorina tamin'ny tantaran'ny fividianana
Vao nanova ny politika momba ny fampiharana novidina i Apple ary nesorina tao amin'ny App Store avy eo.
Rindrambaiko izay hampivoatra anao amin'ny watchOS 2
Efa manavao ny rindranasan'izy ireo ny mpamorona mba hampifanaraka azy ireo amin'ny watchOS 2 vaovao sy ireo fiasa vaovao arosony.
Ny fakantsary + dia lasa afaka miaraka amin'ny fandoavam-bola
Ny fampiharana fakantsary matihanina malaza ho an'ny iPhone s dia niverina maimaim-poana ary miaraka amin'ny fandoavam-bola.
Faminaniana manokana: Inona no ho hitantsika ao amin'ny lahateny fototra androany?
Midoboka ao anaty dobo aho miaraka amin'ny faminaniana manokana momba izay ho hitantsika anio tolakandro mifototra amin'ny hearsay sy lojika, miaraka amin'ny fanantenana kely.
Outlook dia mamela antsika hanokatra miraiki-po amin'ny Office
Isan-kerinandro ny bandy ao amin'ny Microsoft dia mampiditra fiasa vaovao amin'ny mailaka Outlook.
Microsoft Word, Powerpoint ary Excel dia havaozina amin'ny fotoana iray
Nanapa-kevitra ny hanavao ny serivisy Office iray manontolo i Microsoft amin'ny fotoana iray: Microsoft Word, Powerpoint ary Excel manampy fampidirana miaraka amin'ny rindranasa Outlook
Navtophoto dia mamela antsika hahita ny adiresy amin'ireo sary nalaina
Misaotra an'i Navtophoto afaka mahafantatra ny adiresy marina momba ny toerana misy ny sary alainay amin'ny iPhone.
Mamorona kaonty iTunes App Store tsy misy carte de crédit
Fampianarana hamoronana kaonty iTunes tsy misy carte de crédit amin'ny iPhone, nohazavaina tsikelikely mba hahafantaranao ny misintona fampiharana maimaimpoana nefa tsy mandoa vola.
Ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Apple Watch
Manolotra lisitr'ireo rindranasa tsara indrindra ho an'ny Apple Watch izahay
Safidy App Store: Ny lalao 15 mahatsikaiky indrindra
Andro vitsy lasa izay, ny App Store dia nanolotra fanangonana lalao vaovao mitondra ny lohateny hoe: Ireo lalao 15 mahatsikaiky indrindra ao amin'ny App Store
Ireo fiasa izay ho tonga amin'ny fampiharana YouTube ho an'ny iOS
Hohavaozina tsy ho ela ny Youtube ary hitondra fiovana lalina amin'ny fampiasa sy ny endriny izay hanampy ny mpampiasa maro hanohy hankafy ilay fampiharana.
Microsoft OneNote dia mandefa widget ho an'ny Notification Center
OneNote dia nandefa kinova vaovao miaraka amin'ny vaovao tena mahaliana toy ny widget vaovao foibe fampandrenesana
Google Play Kiosko dia manatsara ny fampiharana ao amin'ny App Store
Ny G lehibe dia nandefa fanavaozana vaovao amin'ny Google Play Newsstand izay anampiana vaovao mifandraika amin'ny magazine sy ny fizarana Featured
Toca Life: Lalao vaovao tanànan'i Toca Boca
Toca Boca dia hanangana lalao vaovao amin'ny 26 Jona: Toca Life City
Spark, mpanjifa mailaka vaovao ho an'ny iPhone tonga am-kery
Readdle dia nandefa Spark, mpanjifa mailaka tena tsara izay tonga hijoro amin'ny Outlook ary safidy iray hafa mety ho an'ny Mail
Tsy ho afaka hahita horonantsary YouTube intsony izahay amin'ny efijery feno ao Safari
Youtube dia nanavao ny mpilalao ao amin'ny navigateur, manakana ireo mpampiasa manana iDevice tsy hahita ireo horonantsary amin'ny efijery feno
Ahoana ny fomba hanampiana stiker vaovao amin'ny Telegram ho an'ny iPad
Misaotra ny vondrom-piarahamonin'ireo mpampiasa, afaka manampy stiker misy lohahevitra rehetra amin'ny rindranasanay hafatra Telegram izahay
Ahoana ny fampidinana NBA Jam maimaim-poana noho ny IGN
Asehonay anao tsikelikely ny fomba fampidinana maimaimpoana ny lalao NBA Jam
Te hampakatra fampiharana amin'ny App Store ve ianao? Raha azo vakiana ny "Android" dia tsy ho azonao izany
Nolavin'i Apple ny fanavaozana ny rindranasa iray hananana pikantsary ahafahantsika mamaky ny teny "Android"
Ahoana ny fomba hijerena andian-tsarimihetsika amin'ny iPad
Ny rindranasa tsara indrindra hankafizana andian-tsarimihetsika amin'ny iPad sy iPhone
Afaka mampiditra sary ao amin'ny Google Docs sy Slides isika izao
Google Documents and Presentations, rindranasa ahafahantsika mamorona sy manova ny antontan-taratasy sy ny fampisehoana dia nanampy ny fampidirana sary
Ny rafi-bisikileta any London izao dia manana fampiharana ofisialy
Santander Cycles dia nandefa ny fampiharana ofisialy azy ho an'ny rafitra fanofana bisikileta any London amin'ny farany
Tonga amin'ny Facebook Messenger ny antso an-tsary
Facebook Messenger dia namela antso video tamin'ny alàlan'ny fanavaozana ny app, fa tsy tany amin'ny firenena rehetra indray mandeha.
TestFlight, andrana ireo fampiharana beta amin'ny iPhone, iPad ary Apple Watch anao
TestFlight no sehatra natolotr'i Apple ho an'ny mpamorona mba hahafahan'ny mpampiasa rehetra manandrana ny fampiharana beta
Fampiharana maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Apple Watch
Misafidy ny sasany amin'ireo rindrambaiko mahaliana indrindra mifanentana amin'ny Apple Watch izahay
Miaraka amin'ny Apple Watch isika dia afaka mibaiko feo am-peo ho an'ny OneNote
Noho ny microphone an'ny Apple Watch dia azontsika ampiasaina izy io handraketana naoty sy hitahiry azy ireo mivantana ao amin'ny OneNote.
PowerPoint mamela anao hifehy fampisehoana amin'ny Apple Watch
Ny fanavaozana PowerPoint vaovao dia hahafahan'ny mpampiasa mifehy ny famerenana ny fitaovana amin'ny alàlan'ny iPhone
Hitsahatra tsy hiasa amin'ny fitaovana iOS taloha intsony ny fampiharana YouTube
Google dia nanambara fanovana vaovao amin'ny YouTube API izay hametra ny fiasan'ny fampiharana amin'ny iOS 7 na avo kokoa
Mamela antsika handamina ny vondrona misy anay izao ny vondrona Facebook
Ny fampiharana Facebook Groups dia nohavaozina ho amin'ny andiany 11 ao amin'ny App Store izay manampy ny fandaminana ny vondronay rehetra
Office Lens, rindranasa vaovaon'i Microsoft hanadihady antontan-taratasy ao amin'ny App Store
Vao avy namoaka ny fampiharana ny Office Lens ao amin'ny App Store i Microsoft, izay ahafahantsika mijery antontan-taratasy ao anatin'ny segondra vitsy.
Agri Birds, sangisangy an'i Rovio izay saika nino daholo izahay [Nohavaozina]
Rovio dia te handray anjara amin'ny Andron'ny Adala amin'ny volana aprily ary izany no antony namotsahany mpanafika lalao an-tsaina: Agri Birds
Fianjerana vaovao an'ny App Store sy iTunes Store
Toa tsy mandeha amin'ny serivisy any amin'ny firenena sasany intsony ny iTunes Store sy ny App Store, tsy toy ny nitranga roa herinandro lasa izay.
iOS 8.3 dia mamela antsika misintona lalao maimaim-poana nefa tsy miditra amin'ny teny miafintsika
Iray amin'ireo zava-baovao ao amin'ny iOS 8.3 ny safidy hanafoanana ny fangatahana teny miafina rehefa misintona fampiharana maimaimpoana isika.
Nohavaozina ny Toca Kitchen 2 ary ahafahantsika mahandro miaraka amin'ny akora fanampiny
Ny lalao ho an'ny ankizy Toca Kitchen 2 dia nahazo fitaovana vaovao sy fitaovana fandrahoana sakafo
Ity no fanavaozana Pixelmator goavambe
Pixelmator dia nandefa ny kinova 1.1 ao amin'ny App Store izay manampy endri-javatra vaovao am-polony, ao anatin'izany ny rafitra watercolors vaovao.
Modern Combat 5 dia havaozina ho an'ny mpanara-maso MFI sy vaovao maro hafa
Modern Combat 5 Blackout dia mahazo fanavaozana lehibe izay mitondra vaovao lehibe ho antsika
Wunderlist dia mamela ny famoronana lahatahiry
Wunderlist dia nohavaozina ao amin'ny App Store izay manampy fiasa vaovao mifandraika amin'ny fandaminana lisitra amin'ny alàlan'ny lahatahiry
Magic Touch, lalao iray fehezintsika amin'ny rantsantanana iray monja
Magic Touch dia iray amin'ireo lalao mitombo haingana indrindra amin'ny App Store, ny tombony azo dia azo fehezina amin'ny tanana iray fotsiny
Ny zavamaniry vs. Zombies 2 dia mandray ny 'Frozen Caves II'
Frozen Caves II dia fizarana vaovao natomboka tao amin'ny kinova vaovao an'ny Plants vs Zombies 2 izay ahitantsika ireo zombie sy ambaratonga vaovao
VLC ho an'ny iOS dia miverina ao amin'ny App Store
Niverina tao amin'ny App Store ny VLC rehefa nanjavona tsy nisy soritra noho ny tsy fahombiazan'ny fahombiazana, antenaina fa horaisina tsara ny mpilalao malaza indrindra amin'ity indray mitoraka ity.
Ny App Store izao dia manaiky fampiharana hatramin'ny 4GB
Apple dia mampiakatra ny haba ambany indrindra amin'ny 2Gb ka hatramin'ny 4Gb rehefa mampakatra fampiharana na lalao ao amin'ny AppStore.
Ny famerenana horonan-tsary dia mamorona endri-javatra sy mozika vaovao
Ny editor Video Replay dia nahazo fanavaozana vaovao izay nanampiana hira vaovao ary nohatsaraina ny kalitaon'ny horonantsary
Ny Infuse 3 dia mamela ny streaming amin'ny alàlan'ny FTP sy Google Cast
Infuse dia navaozina tao amin'ny App Store mamela ny atiny hilalao amin'ny alàlan'ny streaming amin'ny alàlan'ny FTP sy Google Cast, ankoatry ny fiasa vaovao hafa.
Tonga ny fanavaozana voalohany ho an'ny rindranasan'i Microsoft an'ny Outlook an'ny fitaovana iOS
Fampiharana hitantanana mailaka amin'ny iPhone (III)
Manampy fampiharana vaovao telo ao amin'ny lisitry ny app izahay hitantanana ny mailakay amin'ny iPhone
Taratasy nataon'i FiftyThree dia manolotra ny safidiny premium rehetra maimaim-poana
FiftyThree dia nanapa-kevitra ny hametraka ny endri-javatra premium rehetra ao amin'ny fampiharana Paper ho afaka maimaim-poana ho antsika rehetra.
Crossy Road, ny lalao vaovao tianao halaina
Ny irakao ao amin'ny Crossy Road dia ny tsy hamelana azy ireo hamono anao ary hahazo ny vola madinika rehetra azonao hamaha ny tarehin-tsoratra rehetra azonao atao.
Ny fanavaozana ny 1Password vaovao dia mitondra fiasa vaovao ho antsika
Ny fampiharana 1Password mahafinaritra dia vao nohavaozina tao amin'ny App Store miaraka amin'ny vaovao manandanja
Very kalitao ve ny App Store?
Izahay dia mamakafaka ny App Store sy ny toetoetran'ny kalitao sy ny serivisy ankehitriny.
Antony 15 handao ny WhatsApp amin'ny Telegram
Asehonay anao ny antony 15 mahatonga ny fampiharana fandefasan-kafatra Telegram tsara kokoa noho ny WhatsApp
Google Maps ho an'ny iOS dia mahazo fiasa vaovao
Google Maps dia nahazo vaovao farany izay manampy vaovao tena ilaina.
Google Translate for iOS dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao manandanja
Google dia nanolotra ny fanavaozana vaovao ny fampiharana mpandika teny izay mampiditra endri-javatra vaovao manan-danja
AllCast dia mamela antsika hampiseho ny atin'ny roul raha tsy misy Apple TV
Ny fampiharana AllCast dia ahafahantsika mamerina mamoaka ny atin'ny serivisy fitehirizana sy rahona amin'ny fahitalavitra Smart
Ny rindranasa nofidian'i Apple hanome ao anatin'ny fampiharana Apple Store dia Waterlogue.
Ny fampiharana tsara indrindra hijerena ny Instagram amin'ny iPad
Ireto ireo rindranasa telo izay, raha ny hevitro, no tsara indrindra hijerena ny sakafonay amin'ny tambajotra sosialy sary: ​​Instagram
Infuse dia havaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana amin'ny serivisy Trakt
Infuse dia nohavaozina ao amin'ny App Store izay ahafahantsika mampifanaraka ny kaontinay amin'ny Trakt hanarahana ny sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika
Ny Pocket Drive dia mamadika ny iPhone sy iPad ho kapila mafy tsy misy tariby
Pocket Drive dia mamela anao hamindra rakitra na avy amin'ny iPhone sy iPad tsy mila tariby.
Manana 14 andro ianao izao hamerenana ireo lalao sy rindranasa avy amin'ny App Store
Ny fahazoana famerenam-bola amin'ny fividianana avy amin'ny App Store dia azo atao raha ataonao alohan'ny 14 andro aorian'ny fandoavana ny fangatahana na ny lalao
Ny TVSofa dia hikatona amin'ny lalàna vaovao momba ny fananan-tsaina
Ny lalàna vaovao momba ny fananana ara-tsaina dia nahatonga ny fampiharana TVSofa malaza hikatona, na dia nambara nandritra ny taona 2015 aza ireo fangatahana vaovao
Ny fampiharana tsara indrindra tamin'ny 2014 ho an'ny iOS
Safidy miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra ho an'ny iOS an'ny 2014.
Facebook Messenger dia mamela anao hahita izay namaky ny hafatrao
Nanampy ny lahasa ny Facebook Messenger hanamarinana raha namaky na tsia ny hafatray ny mpampiasa
Amboary ny olana Tsy afaka mifandray amin'ny App Store
Atorinay anao ny fomba famahana ny olan'ny fifandraisana amin'ny iPad na iPhone amin'ny App Store
Xcode dia havaozina amin'ny iOS 8.1 sy OS X Yosemite SDK
Xcode kinova 6.1 dia tonga tao amin'ny Mac App Store miaraka amin'ireo SDK vaovao ho an'ny iOS 8.1 sy OS X Yosemite
Fampiharana Facebook nohavaozina ho an'ny iPhone 6/6 Plus
Efa tara io, saingy farany azo lazaina fa nohavaozina ny fampiharana Facebook ho an'ny iPhone 6/6 Plus. Ny fanavaozana, navoaka tao amin'ny AppStore
Ny zavamaniry vs Zombies 2 dia mandefa «The beach of the great gelombang I»
PopCap dia namoaka fanavaozana vaovao izay misy fizarana vaovao antsoina hoe: "The beach of the great gelombang I"
Mamaha olana amin'ny iPhone 6 sy 6 Plus ny Gmail
Google dia namoaka kinova vaovao (miaraka amin'ny isa pi) amin'ny fampiharana azy hijerena ny mailakao Gmail, manamboatra lesoka
Ahoana ny fomba hanafenana ireo apps novidiana ao amin'ny iOS 8 (App Store)
Noho ny iOS 8 dia azontsika atao ny manafina ireo apps novidiana tao amin'ny App Store, izany hoe esory ireo fampiharana ireo avy amin'ilay faritra: "Vidina"
Ireo lalao 5 izay tsy tokony ho hita tampoka amin'ny iPad rehetra
Ireto lalao ireto no tsy tokony ho tsy hitako amin'ny iPad rehetra: avy amin'ny lalao ho an'ny ankizy toa ny Cut the Rope 2, ka hatramin'ny zava-misy toy ny Real Racing 3
GoodReader izao dia manohana ny iCloud Drive sy ny Handoff
Ny fampiharana hamaky PDF, GoodReader, dia nohavaozina mba hifanaraka amin'ny iOS 8 sy ny asany rehetra toa ny iCloud Drive sy Handoff
FIFA 15 izao dia azo sintonina maimaimpoana ao amin'ny App Store
EA Sports dia efa namoaka ny FIFA 15 vaovao ho an'ny iPhone sy iPad, izay azo sintonina maimaimpoana ao amin'ny App Store.
SwipeSelection Pro sy AltKeyboard 2 dia ho tonga ao amin'ny App Store tsy ho ela
AltKeyboard 2 sy SwipeSelection Pro dia efa miomana hamely ny App Store
Ahoana ny fomba famonoana ireo fampidinana automatique an'ny iPad
Raha tsy tianao hampidina ho azy ny fampiharana, ny mozika ary ny fanavaozana ny fitaovana ampiasainao, dia vonoy ny fisintomana mandeha ho azy amin'ny iPad anao
Ny lalao «Vasebreaker» kely dia miverina amin'ny Plants vs Zombies 2
Miaraka amin'ny fanavaozana ny Plants vs Zombies 2 vaovao, dia tafiditra ao ny minigame "Vasebreaker", hankafizanao bebe kokoa PvsZ2
Torohevitra 9 sy tetika momba ny lalao malaza: Candy Crush
Mampiseho anao toro-hevitra sy tetika 9 izahay handresena ny ambaratongan'ny Candy Crush
Ny rindranasa tsara indrindra hidirana amin'ny Instagram avy amin'ny iPad
Ireo mpampiasa IPad dia tsy afaka mankafy rindranasa voavolavola avy amin'ny tambajotra sosialy Instagram, saingy misy ny fampiharana izay mitondra ireo toetra ireo amin'ny iPad.
Aloavy ny faritra manga amin'ny iPhone misy e-park
Ny e-park dia mamela anao handoa ny faritra manga amin'ny findainao, hanavao ny tapakila ary handoa ny onitra azonao mihoatra ny fotoana nomenao
Fa maninona no misy fampiharana misy karama ao amin'ilay faritra maimaim-poana?
Azo antoka fa nahatsikaritra ianao fa misy fampiharana voaloa ao amin'ny faritra maimaim-poana amin'ny App Store, nahoana?
Ny fitokisan'ny Facebook Messenger
Ny fanovana avy amin'ny Facebook ho Facebook Messenger dia saika misy ny fanolanana an-keriny ny fitaovantsika nataon'i Mark Zuckerberg.
Ahoana ny fomba hamerana ny fidirana amin'ny App Store, iBooks Store, ary iTunes
Amin'ity lahatsoratra ity dia hianarantsika ny fomba famerana ny fidirana amin'ny fivarotana iOS rehetra toy ny App Store amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny iOS
PowerPoint dia mandefa ny Presenter View sy ireo fiasa vaovao hafa
Noho ny kinova 1.1 an'ny Microsoft PowerPoint dia afaka mampiditra horonantsary amin'ny fampisehoana isika ary miditra amin'ny Moderator View ho fanampin'ny zavatra hafa
Ny lalao fiarovana tsara indrindra an'ny tower an'ny iOS
Nasehonay anao ny lalao Tower Defense dimy izay tsy hainao ny mitsahatra manandrana.
Ny rindranasa misy tombony lehibe indrindra amin'ny App Store dia lalao
Ny sasany dia nahavita lasa olona amina milionera tamin'ny fitaovana iPhone sy fivoarana ho azy ireo, saingy amin'ny tranga mihoatra ny 80%, miaraka amin'ny lalao.
Disney mamelombelona ny lalao Facebook malaza Ball
Ny lalao Facebook malaza Bola, dia miseho indray fa ity indray mandeha ho fampiharana ho an'ny iOS fotsiny.
GT Racing 2: Ny tena traikefa amin'ny fiara dia havaozina amin'ny fiara vaovao
Iray amin'ireo lalao fiara tsy dia misy dikany loatra amin'ny App Store, GT Racing 2: The Real Car Experience, no nohavaozina miaraka amin'ireo fiasa vaovao manaitaitra
Ny zava-maniry vs Zombies 2 dia havaozina amin'ny tontolo vaovao
PopCap dia nanavao ny lalao filamatra, Plants vs Zombies 2, nanampy tontolo vaovao: ny Dark World.
LEGO Marvel Super Heroes, ny vaovao avy amin'ny Warner Bros ho an'ny iOS
Titre vaovao tonga amin'ny App Store: LEGO Marvel Super Heroes: Universe in Peril
Tsy mamela ny fanavaozana na fametrahana indray ny rindranasa haverina intsony i Apple
Nanova ny politikan'ny fampiharana miverina sy naverina tamin'ny laoniny i Apple, ankehitriny tsy afaka havaozina intsony izy ireo na tsy afaka misintona intsony raha tsy mividy azy io indray.
Adobe Photoshop Touch mahazo karazana borosy vaovao
Adobe dia nanavao ny fampiharana Adobe Photoshop Touch amin'ny karazana borosy vaovao sy fanavaozana tena lehibe hafa toy ny fanarenana mandeha ho azy
Autodesk dia mandefa FDX Review hijerena rakitra 3D
Vao nandefa ny fampiharana FDX Review ho an'ny iOS sy OS X i Autodesk, izay ahafahantsika mijery ireo sarimiaina 3D noforoninay tamin'ny sehatra hafa.
Mpampiasa maro no manana olana amin'ny fanavaozana ny fampiharana azy
Misy bibikely vaovao tonga eo amin'ny App Store. Amin'ity indray mitoraka ity, tsy afaka manavao ny fampiharana izahay noho ny olana amin'ny Apple ID.
Google Drive dia mamela anao hametraka kaody 4-isa ho an'ny filaminana
Google dia nanavao ny fampiharana cloud: Google Drive, manampy ny mety hametrahana teny miafina izay miaro ny angon-drakitra fampiharana
Notability, ny fampiharana maimaim-poana amin'ny herinandro
Notability, iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra ahazoana karazana naoty, lasa maimaimpoana noho ny fampiharana ny herinandro ao amin'ny App Store.
RollerCoaster Tycoon 4 dia misy amin'ny iOS izao
Vao namoaka ny RoolerCoaster Tycoon 4 ho an'ireo fitaovana iOS i Atari. Azontsika atao izao ny mamorona ny voly fialamboly ankafizintsika amin'ny iPad
Real Racing 3 dia mamoaka vaovao vaovao miaraka amin'ny fanavaozana
Ny lalao hazakazaka tsara indrindra azo jerena ao amin'ny App Store, Real Racing 3, dia nohavaozina tamin'ny fanampiana fiara vaovao, sarintany ary fanatsarana hafa
Ahoana no hanatsaranao ny fampiharana YouTube ho an'ny iPad?
YouTube dia iray amin'ireo sehatra tsara indrindra hijerena horonantsary mikoriana saingy ny fampiharana azy ho an'ny iOS dia somary mitebiteby ihany, inona no mety hanatsara azy?
Tonga tao amin'ny App Store i Family Guy
Farany, ary rehefa afaka volana maro niandrasana hatramin'ny nanambarana azy, afaka mankafy ny lalao dadanay isika izao ...
Word Monsters: ny lalao Rovio Stars vaovao, amin'ny antsipiriany
Raha tianao ny famolavolana ny lalao Rovio Stars dia vintana ianao satria namoaka lohateny vaovao antsoina hoe Word Monsters mifototra amin'ny fikarohana teny izy ireo
Ny zavamaniry vs Zombies 2 dia havaozina miaraka amin'ny zombie futuristic vaovao
Ny kinova vaovao an'ny Plants vs Zombies 2 dia tonga tao amin'ny App Store miaraka amina tarehin-tsoratra vaovao futuristic manana fahaiza-manao sy fiasa vaovao
Ahoana ny fomba hijerena ireo fividianana vita amin'ny Apple ID ao amin'ny iTunes
Amin'ity fampianarana kely ity dia mampianatra anao izahay hahafantatra ny tantaran'ny fividianana natao tamin'ny Apple ID avy amin'ny solosainao miaraka amin'ny iTunes
Pocket dia mandefa ny endrika "Vakio ivelan'ny tsipika" any amin'ny firenena maro hafa
Ny kinova Pocket vaovao dia ahafahan'ny mpampiasa mijery atiny multimedia tsy misy fifandraisana Internet.
Ny zava-maniry vs Zombies 2 dia havaozina amin'ny ambaratonga sy fahafinaretana bebe kokoa
Ny lalao vaovaon'ny PopCap, Plants vs Zombies 2, dia nohavaozina tamin'ny fampidirana ambaratonga vaovao izay mampitombo ny fahafinaretan'ny lalao.
Toca Boca dia mandefa ny anaram-boninahitra vaovao ao amin'ny App Store: Toca Pet Doctor, lalao mahafinaritra ahafahan'ny ankizy lasa mpitsabo biby.
Ny zava-maniry vs Zombies 2 dia nohavaozina miaraka amin'ny namana taloha: «Dr Zombie»
PopCap dia namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny Plants vs Zombies 2 izay ahafahantsika mahita ny fahavalo malaza amin'ny fizarana voalohany: Dr. Zombie
Ny fanavaozana ny Google Maps vaovao dia mampiseho amintsika ny lalana haingana indrindra
Google Maps kinova 2.6.0 dia mamela ny mpampiasa hisafidy ny zotra haingana indrindra amin'ny menio fitetezana
Nolavin'i Apple ireo fampiharana izay tsy misy sora-baventy, fa mitazona ny angon-tsainay
Manomboka mandà ireo rindranasa misy ny fenitra IDFA i Apple, saingy tsy mampiseho doka
Ny famitahana ny rindranasa hijerena fahitalavitra amin'ny iPad
Indraindray ny fisoratana anarana dia miseho ao amin'ny App Store hijerena fahitalavitra mandoa amin'ny iDevices, fangatahana karama misy isa diso.
GoodReader dia nohavaozina tanteraka amin'ny fanavaozana azy ho an'ny iOS 7
Ny rindranasa GoodReader dia mahazo ny fanavaozana lehibe azy (miaraka amina adaptation amin'ny iOS 7) izay manana asa vaovao mihoatra ny ampolony.
Ny endrika vaovao (sy mahatalanjona) an'ny PicsArt ho an'ny iOS 7
PicsArt, iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hanovana sary, novaina tao amin'ny App Store namolavola tanteraka ny endriny
#SorteoActiPad: Kaody promo 4 LoginBox
Ilaina ny fiarovana ny iPad ary amin'ny LoginBox, azo antoka ny teny miafina sy ny anaran'ny mpampiasa ny tranonkala.
Fanadihadiana feno momba ny Cut the Rope 2: Om Nom sy ny Nommies
Araka ny nampanantenainay, mamakafaka amin'ny an-tsipiriany ireo toetra mampiavaka ny Cut the Rope 2 izahay ary manombatombana azy amin'ny tanjona sy ny tanjona.
ZeptoLab dia mampiseho ny tranofiara faharoa an'ny Cut the Rope 2
Cut the Rope 2 dia havoaka ao amin'ny App Store amin'ny 19 Desambra, fa mandra-pahatongan'izany dia afaka mankafy ity tranofiara faharoa an'ny lalao lehibe ZeptoLab ity isika
Atsaharo ny filalaovana horonantsary mandeha ho azy amin'ny Facebook amin'ny iPad
Rehefa mijery ny rindrintsika amin'ny Facebook isika, dia manomboka milalao ho azy ireo horonantsary, mandany tsy misy antony ny taham-data.
LEGO Star Wars: Ny saga feno izao dia azo alaina amin'ny iPhone sy iPad
Raha mpankafy LEGO sy Star Wars ianao, ny lalao LEGO Star Wars iOS dia angamba ilay nandrasan'ny maro tamintsika.
Temple Run 2 dia mandefa ny fanavaozana ny Noely
Toy ny mahazatra, Temple Run 2 dia nandefa ny kinova vaovao izay ny tanjony lehibe dia ny mikendry ny hiatrika ny Noely amin'ny fomba mahafinaritra.
Fanavaozana ny herinandro: Plex sy vorona romotra be dia be
Nandritra ity herinandro ity dia tsy firy ireo rindranasa nohavaozina fa nangoninay ireo rindranasa telo izay be dia be ny fanavaozam-baovao ary tian'ireo mpampiasa izany.
Te-hisintona maimaimpoana ny Infinity Blade II ve ianao?
Misaotra ny IGN, afaka maka ny lalao Infinity Blade II maimaim-poana isika mandritra ny volana Desambra.
Fomba fanomezana fanomezana avy amin'ny App Store
Manazava tsikelikely ny fomba ahafahantsika manome fampiharana ho an'ny olon-kafa izahay, safidy tsara ho an'ity Noely ity
Ahoana ny fomba fanomezana fanomezana fampiharana amin'ny alàlan'ny iTunes na amin'ny App Store
Androany isika dia milazalaza ny fomba fanomezana apps amin'ny alàlan'ny iTunes na mivantana amin'ny alàlan'ny App Store amin'ny fanarahana ireo dingana tsotra 9 ireo.
PayPal dia manolotra karatra fanomezana ho an'ny fivarotana iTunes
Manomboka izao dia afaka mividy karatra fanomezana amin'ny vavahady PayPal izahay amin'ny tsindry roa.
Jetpack Joyride dia mandray ny fanavaozana lehibe indrindra ao amin'ny App Store
Ny lalao Jetpack Joyride dia nohavaozina tao amin'ny App Store miaraka amin'ny iray amin'ireo fanavaozana lehibe indrindra hatramin'izay: fiara vaovao ...
myMail fampiharana mailaka tena mahaliana
myMail, mailaka maimaimpoana azo alaina ho an'ny iPad sy iPhone ary manohana ny kaonty Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook, Hotmail, IMAP / POP3
Fanavaozana ny herinandro: iTunes U, iBooks, Gmail, Pocket ary maro hafa
Indray mandeha indray, iPad News dia manome anao ireo fanavaozana manan-danja indrindra amin'ny herinandro ao anatin'ny App Store ho an'ny Apple iDevices
Ny fampiharana SoundCloud dia havaozina amina endrika vaovao
SoundCloud, iray amin'ireo rindrambaiko malaza indrindra ao amin'ny App Store, no nohavaozina ho an'ny iOS miaraka amina endrika vaovao
Fanavaozana ny Google Drive miaraka amina kaonty maro sy sonia tokana
Google Drive no fitehirizan-dranon'i Google izay namoaka kinova vaovao ho an'ireo fitaovany iOS.
Google Search for iOS dia manampy ny asan'ny 'OK Google'
Ireo mpampiasa IPhone 4s na taty aoriana dia afaka miteny tsotra izao OK Google hanombohana fikarohana amin'ny feo.
Fampiharana 10 ho an'ny iPad Air sy iPad Mini Retina asongadin'i Apple (sy III)
Manohy amin'ny fampiharana 10 hafa natao ho an'ny iPad Air sy iPad Mini Retina vaovao izahay, nofidian'i Apple ho an'ireo fitaovana ireo.
Shazam dia nohavaozina ao anatin'izany ny vaovao ao anaty fahana «Namana»
Ilay fampiharana zatra fihazana hira: Shazam, nohavaozina tamin'ny fanovana ny anarany avy amin'ny "Friends Feed" ho "News Feed".
Tonga ny andro maizina indrindra amin'ny taona: Halloween, ary izany no ampisehoanay anao ireo rindranasa 3 hisafidianana ireo sary miaina mampihoron-koditra anao.
iLife, suite famoronana nataon'i Apple (II): Garageband
Niresaka momba ireo fiasa vaovao rehetra izay entin'i Garageband izahay taorian'ny nohavaozina noho ny fanavaozana be ny iWork sy iLife.
1Password dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanatsarana WiFi vaovao sy fanatsarana iCloud
1Password, ny fampiharana tsara indrindra hitantanana fanalahidy sy angona manan-danja dia havaozina miaraka amin'ny fanatsarana lehibe.
Ovao ny carte de crédit mifandraika amin'ny kaontinao Apple
Ny fanovana ny carte de crédit na debit mifandraika amin'ny kaontinao Apple dia mora be. Manazava amin'ny antsipiriany ireo dingana izahay.
Azo lalaovina amin'ny mode multiplayer ao amin'ny XCOM: Enemy Unknown
XCOM: ny fahavalo tsy fantatra dia nohavaozina tao amin'ny App Store nanampy fanampiana marobe mba hahafahanao milalao miaraka amin'ny namantsika avy amin'ny Game Center mankany amin'ity lalao mahafinaritra ity
Ny filalaovana video an-tserasera an-tserasera an-tserasera amin'ny YouTube dia ho tonga amin'ny iOS amin'ny Novambra
Nanamafy i YouTube fa ho tonga amin'ny Novambra ny asany ho an'ny fitaovana finday hahafahany mijery horonantsary tsy misy fifandraisana Internet
SlowCam dia mamela antsika hanoratra amin'ny 60 fps amin'ny iPhone 5 / iPad Mini
Ho an'ireo mpampiasa izay tsy hanova ireo iPhone 5 vaovao handraisana am-peo miadana dia manana SlowCam izahay, ahafahantsika manoratra amin'ny 60 FPS tsy misy olana.
App amin'ny herinandro: ny vatan'olombelona
Indray mandeha indray, Apple dia mametraka ny "The Human Body" ho App amin'ny herinandro. Fampiharana hahafantarana ny atitany misy ny fitaovana sy ny rafitra.
Tsy ho mora foana ny misintona kinova taloha
Ny fahafahana misintona kinova taloha an'ny fampiharana iray avy amin'ny App Store ho an'ny fitaovana iOS taloha dia miankina amin'ny developer.
Ankizy: sokajy vaovao ao amin'ny App Store
Asa be foana ny fikarohana ny app ho an'ny ankizy ao amin'ny App Store. Saingy niova izany. Tao amin'ny Apple dia namorona sokajy vaovao izy ireo: Ankizy
Vimeo dia tafiditra ao amin'ny iOS 7
Vimeo dia miombona amin'ny iOS 7 ary mandefa fanavaozana vaovao ny fampiharana azy mampifanaraka ny interface aminy amin'ny iOS 7.
Fahagagana Photogene 4 ao amin'ny App Store miaraka amina fanavaozana manaitra
Photogene 4, fampiharana mifandraika amin'ny sary, dia havaozina miaraka amin'ny fanavaozana manaitra feno vaovao: kisary vaovao, interface vaovao ...
Fanavaozana ny herinandro: Google Chrome, PhotoSync, IKEA ary maro hafa
Averina indray, ao amin'ny iPad News no ahitantsika ny fizarana "Fanavaozana ny herinandro" izay asehonay anao ny fiasan'ny rindranasa sasany ao amin'ny App Store
Ny fampiharana 7 tsara indrindra ho an'ny zanaky ny trano
Lisitry ny fangatahan'ny ankizy ho an'ny zanaky ny trano. Manomboka amin'ny rattles virtoaly, tantara mifanakalo ka hatramin'ny sary maromaro.
Infuse dia havaozina miaraka amin'ireo fiasa vaovao mahafinaritra: Fitanisana amin'ny alàlan'ny AirPlay sy maro hafa
Ny fampiharana hijerena saika karazana horonan-tsary, Infuse, dia havaozina miaraka amin'ny fanatsarana maro mifandraika amin'ny AirPlay, Apple TV sy maro hafa
Safidy App Store: Fampidirana ny Photography
Apple dia misafidy ireo fampiharana mifandraika amin'ny sary tsara indrindra manerana ny App Store mba hampisehoana amin'ny olona rehetra mitsidika ny fivarotana app
Hanova, hisaraka ary hanambatra ny Apple ID azo atao?
Apple ID dia miteraka olana matetika amin'ny mpampiasa. Azo ovaina, atambatra na sarahina ve ny Apple ID? Izahay dia manazava aminao ny zava-drehetra.
Manomboka amin'ny iBooks (V): Solony hafa amin'ny famakiana boky
Ao amin'ny Actualidad iPad dia hasehonay anao ny rindranasa sasany izay mety ho safidy hafa amin'ny iBooks, ny fampiharana tsara indrindra amin'ny famakiana boky amin'ny iOS
Manomboka amin'ny iBooks (IV): Fitaovana fianarana
Ao amin'ny fizarana fahefatra amin'ity boky fampianarana "Mampiasa iBooks" ity dia ho hitantsika ireo fitaovam-pianarana toy ny: tsipika, soritra, rakibolana, naoty ...
Yahoo! Mail dia nohavaozina miaraka amin'ny safidy hitantanana lahatahiry
Yahoo! Mail, Yahoo! fanavaozana ny mailaka ho an'ny iOS (App Store) miaraka amin'ny fahafaha-mitantana ireo lahatahiry mailaka sy maro hafa
Safidy App Store: Lalao amin'ny fiara
Manoro hevitra lalao fiara telo izahay ho an'ireo izay mankafy lalao mitondra fiara sy arcade tena izy.
Havaozina tanteraka ny Youtube miaraka amin'ny fanavaozana vaovao
Ny tena zava-misy dia tsy vidy varotra ny fampiharana YouTube. Miaraka amin'ny fanavaozana vaovao, manana endrika vaovao sy endrika vaovao isika: efijery mini.
Fanavaozana ny herinandro: Facebook, Skype, Digg Reader sy maro hafa
Herinandro iray hafa dia asehonay anao ireo fanavaozana tena lehibe indrindra amin'ny herinandro, amin'ity indray mitoraka ity, mifantoka amin'ny famokarana izahay: Facebook, Skype ary maro hafa
Ny tetika 10 ilainao handresena ny haavon'ny Plants vs Zombies 2
Plants vs Zombies 2 dia efa miaraka amintsika ary sarotra ny haavony, saingy amin'ireo tetika ireo dia afaka mandingana ireo ambaratonga feno fankahalana ireo isika.
Ny zavamaniry vs Zombies 2 dia misy manerantany
Ny lalao nandrasantsika rehetra: Plants vs Zombies 2 dia tonga ao amin'ny App Store Espaniola sy manerana an'izao tontolo izao noho ny mpamorona azy: PopCap.
Vevo, ilay fampiharana horonantsary mozika, dia navaozina tamin'ny AirPlay
Vevo, ny fampiharana ho an'ny iPhone sy iPad mamela anao hankafy horonan-tsary amin'ny mozika tontolo andro, dia havaozina miaraka amin'ny fanohanana feno ho an'ny AirPlay.
#SorteoActiPad: Manome kaody fampiroboroboana ny Shark Attack 2 izahay
Ny Shark Attack dia lalao miaraka amin'ireo mekanika mitovy amin'ny Plants vs. Zombies, fa raha tokony ho zavamaniry manafika dia trondro velona ihany.
Fampidinana miadana ao amin'ny App Store? Zahao ny toerana napetrakao
Raha rehefa misintona fampiharana avy amin'ny App Store ianao dia mahatsikaritra fa vita miadana kokoa noho ny tokony ho izy izany dia zahao ireo fisintomana miaraka.
Google Play Books dia havaozina miaraka amin'ny fahafaha-manofa boky
Indray mandeha indray, Google Play Books dia nohavaozina miaraka amina endrika vaovao manan-danja maro: ny mety fanofana boky, fomba famakiana vaovao (Sepia) ary maro hafa ...
Infuse dia havaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny AirPlay, ny famindrana Wi-Fi sy maro hafa
Indray mandeha indray dia gaga anay i Infuse amin'ny fanavaozana azy miaraka aminy, ireo asany vaovao toy ny famindrana rakitra amin'ny alàlan'ny Wi-Fi na ny fidirana AirPlay
Amin'ity fampiharana vaovao ity avy amin'ny appstore dia afaka mametraka ny fifandraisana malalantsika eo amin'ny solaitrabe isika.
Ny app Apple Store ho an'ny iOS dia manomboka manome maimaimpoana ireo rindrambaiko naloa teo aloha nandritra ny fotoana voafetra.
TeamViewer QuickSupport, rindrambaiko fanohanana lavitra vaovao ho an'ny iPhone sy iPad
TeamViewer QuickSupport dia manolotra vahaolana maimaim-poana sy mora hamahana olana amin'ny iPhone na iPad amin'ny lavitra, avy amin'ny solosaina hafa mifandray amin'ny Internet.
Splyce, ny fampiharana espaniola izay mamely
Splyce dia rindrambaiko espaniola izay ahafahantsika mahazo tombony betsaka amin'ny fitehirizam-bokintsika, manolotra fampiasa maro.
Antibiotic Therapeutic Guide, fitaovana tsara ho an'ny dokotera
Ny Hospital de Son Espases dia namolavola torolàlana momba ny fitsaboana antibiotika tsara ho an'ny iPhone sy iPad izay tena ilaina amin'ny dokotera sy ny mpivarotra fanafody.
McTube: ny solon'ny YouTube ho an'ny iPad
Noho ny tsy fahombiazan'ny YouTube dia voatery nitady tamin'ny Internet sy tao amin'ny App Store aho raha te hahita safidy hafa amin'ny fampiharana ofisialy ary hitako: McTube
Ahoana ny fanovana ny mailaka mifandraika amin'ny Apple ID anao
Ny fanovana ny kaonty mailaka voalohany mifandraika amin'ny Apple ID anao dia mety ho tonga imbetsaka.
Tutorial hananganana kaonty ao amin'ny iTunes Store of USA
Mamorona kaonty ao amin'ny iTunes Store any amin'ny firenena hafa, hahafahanao miditra amin'ny atiny afa-tsy ao amin'io firenena io
TouchCast, fanovana horonan-tsary ary fifampiresahana
Manova sy mifandraisa amin'ny horonan-tsarinao amin'ny alàlan'ny TouchCast, fampiharana tsotra iray maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny iPad.
Mamorona kaonty iTunes US
Azavainay ny fomba ahafahanao mamorona kaonty iTunes any Etazonia hahazo tombony amin'ny tahan'ny fifanakalozana dolara -euro sy hankafizanao ny fampiharana manokana.
Ny App Store ho an'ny iPad izao dia mamela ny filaharana alfabikan'ireo rindrambaiko novidiana
Ny App Store ho an'ny iPad dia nahazo fanavaozana mangina izay mamela antsika hanasokajy ireo abidia novidina araka ny abidia.
Firy ny fampidinana ilaina amin'ny fidirana amin'ny Top 10 an'ny App Store?
Trademob dia nanao infographic izay ahitantsika ny isan'ny fisintomana ilaina raha te hahatratra ny Top 10 amin'ny App Store ny rindrambaiko.
Leo aho… amin'ireo fandrika ao amin'ny App Store
Mahazatra hatrany ny mahita hoe misy fandrika ao amin'ny App Store. Mandinika azy ireo izahay.
Lalao birao dimy ho an'ny iPad-nao
Manoro hevitra kilalao birao miavaka dimy izahay ho an'ny iPad
Ireo mpampiasa ITunes dia mandany $ 40 isan-taona eo ho eo
iTunes dia mandrindra fivarotana Apple maro: Mac App Store, iBook Store, App Store, ary iTunes Store. Statistika vaovao mampiseho fa mandany $ 40 isan-taona.
Ianao ve mila vola 200.000 amin'ny Plants vs. Zombies?: Upgrade!
PopCap dia namoaka fanavaozana ny lalao malaza Plants vs. Zombies. Miaraka amin'ny fanavaozana dia hanana vola madinika 200.000 maimaim-poana hampiasaina izahay.
e dia nanavao ny fonon'ny tranonkala ofisialin'i Apple miaraka amin'ny kaontera izay hijanona rehefa mahatratra 50 miliara ny fisintomana.
Rindrambaiko mafy i Moldiv. Amin'ny alàlan'ny Moldiv no ahafahantsika mamorona tononkira noho ny sarinay hamoronana "collage" farany.
Icomania: Azonao vinavinaina daholo ve ireo sary masina?
Icomania dia lalao vaovao iray avy amin'ny mpamorona ny 4 Sary 1 Word. Ao Icomania dia tsy maintsy maminavina endri-tsoratra isika, firenena, sarimihetsika, mpitendry ...
Ny fanangonana ireo rindranasa 10 alaina indrindra ho an'ny iPad, 5 karama ary 5 maimaim-poana, miaraka amin'ny famerenana fohy ny tsirairay amin'izy ireo.
Ny fampiharana retouching sary tsara indrindra misy vokany eo amin'ny App Store izao dia antsoina hoe: FX Photo Studio HD ary maimaim-poana izao.
Tweetbot vs Twitterrific, ireo mpanjifa Twitter roa tsara indrindra mifanatrika
Tweetbot no laharana voalohany tsy azo iadian-kevitra, saingy nihatsara be ny Twitterrific tamin'ny fanavaozana farany farany. Manadihady ireo mpanjifa Twitter roa izahay
Mampihomehy: lalao ho an'ny iPad izay mampiasa tsara ny efijery maro-mikasika
Lalao vaovao no tonga tao amin'ny Apple Store volana vitsivitsy lasa izay, mampihomehy izy io, lalao izay isan'ny rantsan-tananay rehetra amin'ny fahafinaretana.
Ny daty manan-danja amin'ny lalao Cut the Rope: Time Travel HD
Cut the Rope: Time Travel HD dia misy amin'ny fitaovana rehetra izao ary hanavao antsika amin'ny fizarana vaovao ny fampiharana: Om Nom Stories
Ny Apple Store dia mifantoka amin'ny app Newsstand miaraka amin'ny magazine vaovao
Fizarana vaovao ao amin'ny Apple Store antsoina hoe: Vaovao va ianao amin'ny Newsstand?, Mampiseho amintsika gazety sy magazine hanombohana amin'ny tontolon'ny Newsstand for iPad
QuickStore dia manokatra rohy App Store amin'ny rindranasa rehetra (Cydia)
QuickStore dia rindranasa Cydia maimaim-poana izay mamela anao hanokatra rohy rehetra ao amin'ny AppStore nefa tsy mamela ny fampiharana misy anao.
Fampiharana ho an'ny fampiasana matihanina amin'ny fitsaboana
Ny iPad dia mahazo bebe kokoa eo am-piasana, indrindra amin'ny asa sasany toy ny Medicine. Mamporisika fampiharana vitsivitsy izahay.
Ahoana ny fomba hanarahana ny Game of Thrones noho ny iPad anao
Ny fampiharana A World of Ice and Fire dia tonga lafatra mba hanarahana ny fandrosoan'ny Lalao Thrones mahomby
Ny naoty isa lehibe indrindra amin'ny App Store
Apple dia nametraka ny sokajin-taonany amin'ny toerana malaza kokoa eo amin'ny fisie application
Apple dia nanisy fampandrenesana ny taona voatondro ary iray hafa amin'ny fividianana in-app-fividianana ao amin'ny App Store mba hahafantaran'ny mpampiasa azy alohan'ny fisintomana azy.
Amin'ity fanavaozana vaovao ity ho an'ny Spotify, dia azontsika atao ny mampiasa ny lahasa: SYNC AppLink amin'ny fiara Ford izay manohana io asa io.
[Nohavaozina] Nomena kaody 5: iPoe - Fanangonana Interactive Edgar Allan Poe
iPoe dia fampiharana mifototra amin'ny tantaran'ilay genius mahatsiravina miaraka amina famakiana 4 hampiala voly antsika amin'ny alina maizina. Raffle 5 code promo ihany koa no ataonay.
Ny fampiharana tsara indrindra hahitana ny toetr'andro amin'ny iPad
Ny quizze tsara indrindra amin'ny App Store ho an'ny iPad
Ny fanadinana 4 tsara indrindra hita ao amin'ny App Store
Ireo mpandika teny 3 tsara indrindra ho an'ny iPad
Ireo mpandika teny 3 tsara indrindra ho an'ny iPad. Ilaina ny mpandika teny raha mandehandeha izahay ary tsy hainay tsara ilay fiteny ...
Apple dia efa nanamboatra ny lesoka fiarovana amin'ny pejy iForgot
Tookit: fitaovana ilaina 5 amin'ny iPad-nay
Fitaovana Toolkit izay manome fahafaham-po ny filàna tsy ampiharin'i Apple ao amin'ny iOS amin'ny takelaka misy azy: iPad.
Mianara miteny anglisy amin'ny milina Cambridge Phrasal Verbs Machine
Fampianarana handefasana sary avy amin'ny iPad mankany amin'ny solosain (I)
Tsy asa mora amin'ny alàlan'ny paositra ny famindrana sary avy amin'ny iPad mankany amin'ny solosaina, mitondra fampiharana antsoina hoe: Transfer Image isika.
Ireo mpamoaka lahatsoratra tsara indrindra ho an'ny iPad
Ny mpikirakira teny dia efa zava-misy ao amin'ny App Store, mandinika ny 3 amin'izy ireo izahay ary mahita fa misy maro hafa ao amin'ny App Store.
Pejy: mpanodin-teny ao amin'ny Apple
Ny pejy dia mpikirakira teny, angamba ilay matanjaka indrindra, noforonin'i Apple, vidiny 7,99 euro ary misy ao amin'ny App Store.
Real Racing 3 sy ny (damn) fividianana fampiharana
Ny Real Racing 3 dia manatevin-daharana ny lalao freemium, lalao maimaim-poana miaraka amin'ny fividianana tafiditra izay manenika ny zava-drehetra
Flow Free: Lalao mampiala voly amin'ity tolakandron'ny alahady ity
Milamina miaraka amin'ny lalao ho an'ny iPad ny fahasosorana, ary lalao maimaim-poana indrindra ny Flow Free satria misy faribolana mifanentana mitovy loko aminy.
Avereno jerena ny Pro Metronome: App Mandatory ho an'ny mpitendry mozika vao manomboka sy matihanina
Ny zavatra tsara indrindra ho an'ny mpitendry mozika dia ny metrôzônia, mitarika anao amin'ny gadona isa novakianao io. Pro Metronome dia metronomika iPad tena tsara.
Lalao 3 izay hampifandray anao amin'ny tolakandronao mankaleo
Ny lalao manaisotra ny fahasosorana foana ary indraindray misy lalao tena tsara amin'ny vidiny lafo. Ao amin'ny Actualidad iPad dia miresaka lalao 3 tena tsara isika.
Ny fividianana tsy nahy na ny fampiharana izay tsy araka ny nampanantenainy dia zavatra somary matetika. Apple dia mamaly ny fitarainana noho izany antony izany.
Alefaso horonan-tsary zaraina amin'ny tambajotrao amin'ny FileBrowser
Ny mpitantana rakitra Filebrowser dia mamela anao hiditra amin'ireo rakitra zaraina amin'ny tambajotrao, tena ilaina amin'ny filalaovana sarimihetsika amin'ny kapila nozaraina
Joypad dia mamadika ny iPhone ho gamepad iPad
Miaraka amin'ny Joypad Controller sy Joypad Game Console dia hiaina ny traikefa amin'ny lalao kilalao mahazatra amin'ny iPad anao amin'ny alàlan'ny iPhone ho toy ny knob control
Foldify ho an'ny iPad dia ahafahanao mamorona sary nohetezana 3D mahafinaritra
Alefaso amin'ny Foldify ny fahaizanao mamorona, afaka mamorona sary nohetezana 3D be ianao, na manova ireo tonga amin'ny fampiharana ary manonta azy ireo
FileXChange dia mamindra rakitra any amin'ny iPad tsy misy iTunes (Raffle 2 no licence azonay)
FileXChange dia mamela anao hamindra rakitra amin'ny fitaovana iOS amin'ny alàlan'ny tamba-jotra WiFi na Bluetooth, manafoana ny fiankinan-doha amin'ny iTunes sy ny tariby.
ShiftLife - Shift Organizer ho an'ny iOS
ShiftLife no fampiharana mety indrindra ho an'ireo miasa fiovana. Noho ireo modely azonao noforonina dia azonao atao ny manampy azy ireo mora foana amin'ny kalandrianao
Toca Boca: lalao ho an'ny ankizy kely
Toca Boca dia mamolavola lalao natao ho an'ny ankizy kely hahafinaritra sy hianarana amin'ny fotoana iray. Mety hahafinaritra ny manapaka volo, na dokotera na mahandro
Grand Theft Auto: Vice City ho an'ny iOS, miverina amin'ny taona 80.
Rockstar dia manararaotra ny faha-XNUMX taonan'ny famoahana ny Grand Theft Auto: Vice City hanangana kinova vaovao ho an'ny iOS izay ho tianao.
Misy olana vonjimaika miseho amin'ny App Store
Betsaka ny mpampiasa sy ny mpamorona eran'izao tontolo izao no tsy afaka misintona rindrambaiko avy amin'ny App Store ary mahazo hafatra diso.
iOS 6.0 dia mamela ny fanavaozana ny rindranasa nefa tsy mangataka tenimiafina
Mpandresy ny kaody handefasana WiFi2Me maimaim-poana ao amin'ny App Store
Wifi2Me: fanaraha-maso ireo tambajotra WiFi ankehitriny ao amin'ny App Store (Kaody fanomezana)
Wifi2Me: fanaraha-maso ny tambajotra ao amin'ny App Store (Codes giveaway)
Fampiharana hamerenana sy hamonoana ny Bluetooth mankany amin'ny App Store
Avadiho ho lasa marika miaraka amin'ny Symbolizer ny hafatrao
Ao amin'ny Actualidad iPhone dia efa nilaza taminay momba ny Emojizer izahay, ilay fampiharana mamela anay hanova ny teny sy ny andian-teny ho ...
Flixel, ilay fampiharana ahafahanao maka sary miaraka amina hetsika
Flixel dia rindrambaiko natomboka tamin'ity herinandro ity izay ahafahantsika maka sary mihetsika amin'ny fakantsary iPhone….
Ny fifandraisana lavitra dia nohafohezan'ny "oroka lavitra" an'i Pair
Izahay dia mitondra fampiharana iray izay liana liana farafaharatsiny ary efa fahombiazana ao amin'ny App Store. Fantatro…
Manana iPhone miaraka amina fakantsary mahafinaritra, maninona no mivoaka maka sary pasipaoro rehefa azontsika alaina amin'ny ...
The Magic of Words, fampiharana ho fianaran'ny ankizy kely
Androany izahay dia mitondra anao fangatahana ho an'ireo ankizy kely ao an-trano. Momba ny «The Magic of Words«, ...
Ataovy sary ny zavatra iray, ilay Pictionary izay fahatezerana rehetra ao amin'ny App Store
Draw Something dia iray amin'ireo fampiharana "boom" hafa ao amin'ny App Store. Tao anatin'ny dimy herinandro monja dia efa ...
Ahoana ny fomba hitaterana ireo fampiharana hosoka amin'ny App Store mankany Apple hanesorana azy ireo
Ankehitriny ianao dia afaka misintona fampiharana hatramin'ny 50MB raha tsy misy WI-FI
Apple dia nampitombo ny fetran'ny haben'ny fampiharana izay azontsika sintonina avy amin'ny App Store raha tsy misy fifandraisana WI-FI….
Ny fanavaozana ny TV Spain DTT mankany amin'ny kinova 1.1 dia efa misy izao
Raha omaly isika dia miresaka momba ny fanavaozana ny Radio Spain FM dia tokony hiresaka momba ny rahavaviny amin'ny fahitalavitra isika, ny ...
TV Spain DTT: TV amin'ny iPhone sy iPad-nao
Tonga tamin'ny iPad (sy iPhone) ihany ny TV Spain DTT
Maharitra iray volana mahery ny Top 1 of Entertainment sy ao anatin'ny Top 10 Global of the Mac App ...
Mazava: ny fampiharana fampiharana mahavariana indrindra
Taom-baovao fiainana vaovao; fizarana vaovao ao amin'ny App Store
Tamin'ny fahatongavan'ny 2012 dia te hanararaotra ny fotoana i Apple amin'ny famoahana sehatra vaovao ao amin'ny App Store izay ...
Apple manamboatra bug bug App Store ho an'ny mpampiasa iOS 3.1.3
Omaly dia nilaza taminay izahay fa ireo mpampiasa iPhone miaraka amin'ny iOS 3.1.3 sy teo aloha dia nijanona tsy afaka nampidina rindranasa avy ...
ITunes olana amin'ny fisintomana fampiharana sy serivisy hafa (havaozina)
Toa misedra olana i Apple izay manakana ny mpampiasa tsy hiditra amin'ny kaontin'ny mpampiasa azy, ka tsy afaka ...
Toa mahazatra anao ve ny Om Nom? Izy no kintana maitso an'ny Cut the Rope, mpankafy vatomamy tena izy izay ...
Christmas SMS Deluxe: andianteny mihoatra ny 600 hiarahabana ny Noely (Kaody 6 no omentsika)
Efa nieritreritra ny amin'ny SMS hiarahabanao ny Noely ve ianao amin'ity taona ity? (Eny, iza no milaza fa SMS dia ...
Fanavaozana iBooks amin'ny alim-pandihizana amin'ny alina sy ny famakiana amin'ny efijery feno
Ny fampiharana famakiana boky an'i Apple dia nohavaozina ho amin'ny andiany 1.5 miaraka amin'ny fanatsarana lehibe. Anisan'izany ny ...
Contact Backup Over Dropbox: ampirimino ny dropbox (App Store)
Contact backup dia fampiharana App Store izay ahafahantsika manao backup amin'ny contact ...
Fahitalavitra maimaim-poana: fantsom-pahitalavitra mivantana (App Store)
Fahitalavitra maimaim-poana amin'ny fampiharana izay ahafahantsika mankafy fantsom-pahitalavitra mivantana maro avy amin'ny iPhone. Is…
Luma Video Camera, stabilizer ho an'ny fakantsary video an'ny iPhone (App Store)
Luma Video Camera, ny fampiharana miaraka amina stabilizer sary mandeha ho azy, dia hahafahantsika mirakitra horonantsary manana kalitao tsara kokoa noho ny ...
Goear Mobile, henoy ny mozika maimaim-poana amin'ny iPhone na iPad (App Store)
Goear Mobile, ilay rindranasa ahafahantsika mihaino mozika maimaim-poana amin'ny Internet, dia manolotra vondrona maro isan-karazany ...
Ny Angry Birds dia miaina ao amin'ny valan-javaboary iray any Shina
Volana vitsivitsy lasa izay dia nasehonay anao ny fomba nahatongavan'ilay mpivarotra tsara indrindra tao amin'ny App Store, Angry Birds, tamin'ny dokambarotra iray ho an'ny ...
Applist, fomba iray hanaparitahana ny fampiharana amin'ny iPad-nao
Ny ankamaroantsika dia manana fampiharana ampolony na an-jatony amin'ny iPad, koa rehefa namana ny ...
Ahoana ny fomba hampiasana ny fampidinana automatique ny rindranasa
Azonao atao izao ny mampihetsika ny fisintomana mandeha ho azy ny rindranasa novidina tao amin'ny App Store, iray amin'ireo fiasa hitantsika omaly. Mandehana fotsiny ...
Tsy mandeha vetivety [nohavaozina] ny App Store
Nandritra ny minitra vitsy dia tsy afaka nividy na nisintona rindrambaiko avy amin'ny App Store. Ny olana dia azo tsapain-tanana ao ...
Notsapainay ny DJ World Studio ho an'ny iPad
Ny iray amin'ireo filako - ho fanampin'ny olon-drehetra ao amin'ny Apple - dia mozika elektronika, ka tsy afaka nijanona ...
Nidina vonjimaika ny mpizara App Store [havaozina]
Mpampiasa maro no mitatitra fa tsy afaka misintona fampiharana avy amin'ny App Store izy ireo ary mahazo lesoka mahafinaritra toa ny ...
Fizarana vaovao ao amin'ny App Store: «Better Together»
Raha mpidoroka paoma ianao dia namorona faritra ao amin'ny magazay fampiharana azy ho anao indrindra i Apple….
TacticsBoard, fampiharana tonga lafatra ho an'ny mpampiofana
Aleo aho miandany amin'ireo milalao, saingy tsy ho kely ny fotoana hitaterako ...
iA Mpanoratra, anio amin'ny vidiny ambany indrindra
Tiako ny tonian-dahatsoratra minimalist ho an'ny iPad ary mieritreritra aho fa iA Writer dia iray amin'ireo…
Fampahalalana momba ny kaonty Apple anao. Ahoana ny fomba hiarovana ny angon-drakitrao.
Zavatra iray angatahan'ny maro ary, vitsy no mahalala, dia ny fikirakirana ny kaontintsika Apple. Andao hodinihintsika kely ny antsipiriany ...
Shadow Guardian HD ho an'ny iPad, Review
Ny orinasam-pampandrosoana lalao ho an'ny finday Gameloft dia nanangana lalao vitsivitsy tao amin'ny App Store, ...
Red Nova ho an'ny iPad, Review ary CODES PROMO
Ny orinasam-pampandrosoana Celsius Game Studios dia nanambara ny fanombohany ny lalao farany ho an'ny iPad, iPhone ary…
Afaka mividy biby tototry ny Angry Birds ianao izao
Ny tranga Angry Birds dia zavatra tena azo hararaotina ary avy amin'i Rovio dia vonona ny hahazo ny vola rehetra azony atao izy ireo, ...
Ny lalao 25 ​​voalohany izay mamafa ny iPad, iPhone ary iPod Touch anao, avereno jerena ny 2/5
Ny gazety an-tserasera Mundogamers dia namoaka ny lisitry ny lalao 25 ​​izay hanova ny fiainantsika iDevices. Momba ny…
Holo-Paint ho an'ny iPad ary manorata hologramanao manokana, Review
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nasehonay taminao ny horonantsary iray momba ny fomba nanoratan'ny aostraliana sasany sary Holographic tamin'ny iPad. Amin'izao fotoana izao ...
aYa-Manku ho an'ny iPad sy iPhone, Review ary PROMO CODES
Ho valin'ny tolo-kevitra sy fanehoan-kevitra voaray, ny orinasam-pandrosoana Australiana amin'ny fampandrosoana ny Applications and Games ho an'ny iOs, Dust.Bit.Games,…
BANG! Multiplayer voalohany sy lalao finday an-tsehatra voalohany, Review
Bang! Ny lalao Spaghetti Western Board, izay fahombiazana lehibe any Italia, dia hanana ...
Combat Modern 2: Black Pegasus HD ho an'ny iPad, Review
Combat 2 maoderina: Black Pegasus HD ho an'ny iPad, FPS vaovao an'i Gameloft, dia efa hita nandritra ny andro vitsivitsy tao ...
Reckless Racing HD ho an'ny iPad, Review
Reckless Racing HD ho an'ny iPad dia iray amin'ireo lalao hazakazaka mahery vaika izay manambatra ny fomba lalao ...
Ohatra amin'ny ohatrinona ny tena vidiny hanaovana fampiharana ho an'ny iPad, Review
Twitterific Twitterific, ilay fampiharana Twitter malaza indrindra ao amin'ny App store, novolavolaina manokana tamin'ny ezakay manokana. Craig Hockenberry,…
Ohatrinona no tena vidin'ny fanaovana fampiharana amin'ny iPad, Review
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe ohatrinona ny vidin'ny fanaovana application ho an'ny iPad? Tsy te hahafantatra izay mety ...
iMusician PJS ho an'ny iPad, tsy mora velively ny fanoratana mozika, Review
Ny lazan'ny iPod dia tratra voalohany tamin'ny alàlan'ny fahafahany manome ireo mpampiasa ny fidirana amin'ireo ...
Aralon: Sword and Shadow sary tena misy voalohany ary tranofiara vaovao, Review
Ny tranofiara voalohany an'ny Aralon: Sword and Shadow dia nahatratra ny Internet, ary tsara be izany. Aralon no manaraka ...
Fizarana vaovao ao amin'ny App Store natokana ho an'ny tena zava-misy
Apple dia namoaka fizarana vaovao ao amin'ny AppStore natokana ho an'ny tena zava-misy ary mihaona amin'izy ireo ...
Tovovavy tena toetrandro ho an'ny iPad, zazavavy 12 hampifaly anao isan'andro, Review
Steve Dworman Enterprises, Inc androany dia nanambara ny fanombohana ny fampiharana iPad vaovao. Ity fampiharana vaovao ity dia ...
Toy ny fiainana - Famantaranandro famantaranandro sy famantaranandro toetrandro HD ho an'ny iPad, famerenana
Misy fampiharana famantaranandro fanairana sy toera-toetr'andro ao amin'ny iPad App store. Sanatria…
Grand Theft Auto: Chinatown Wars HD ho an'ny iPad, Famerenana
Rehefa avy niandry am-bolana maro dia tonga tamin'ny farany ny iray amin'ireo lalao paosy tsara indrindra ...